Diploma in Business and Management (DBM Online 2020) - YEC Education
Diploma in Business and Management (DBM Online 2020)
Today Promotion = 390,000 Ks
Awarded by City of Oxford College (UK)
စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်တွေကို လေ့လာတဲ့အခါ General နဲ့ Specialization နှစ်ပိုင်းရှိပါသည်။
ဥပမာ Business Management တို့က generalize ဖြစ်ပြီး Marketing, Human Resource Management ဘာသာရပ်များက Specialized ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ စီမံခန့်ခွဲမှု Diploma ကို ပထမဆုံးလေ့လာမည့်သူဖြစ်ပါက Diploma in Business & Management (DBM) ကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
✍️”DBM ဆိုသည်မှာ” Diploma in Business & Management သည် UK ရှိ Oxford မြို.အခြေစိုက် City of Oxford College မှ တိုက်ရိုက်ပေးအပ်မည်. Professional Diploma ဖြစ်ပါသည်။
✍️တခြား Single Subject Diploma တွေနဲ့ဘာကွာသလဲ?
Single Subject ကတော့ ဘာသာရပ်တစ်ခုတည်းကို သီးသန့်လေ့လာရတာဖြစ်သည်။ DBM မှာ Modules ခြောက်ခုရှိပါသည်။ Marketing, Accounting, Economics, HR, Business Environment နှင့် Organizational Behavior တို့ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့် ပို broad ဖြစ်သည့်အတွက် ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းစီကို အထူးပြု မလေ့လာမှီ တက်ရောက်သင့်ပါသည်။ Professional QCF Level3Diploma ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်နေသည့် working professional များအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
= = = = ==================
-MBA ကို ဆက်လက်တက်လှမ်းမည်.သူများ
-Middle Level Management တွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသူများ
-Module ခြောက်ခုပါသဖြင်. ဘာသာရပ်စုံစုံလင်လင် လေ.လာလိုသူများ
-DBM သင်တန်းကိုတက်ရောက်တဲ.သင်တန်းသားအများစုကတော. MNCs Company မှ Middle Level Manager များနှင်. MBA ကိုဆက်လက်တက်ရောက်မည်.သူများရှိသလို Business Management ကို စိတ်ပါဝင်စားသည်. လုပ်ငန်းရှင်များပါရှိပါသည်။
= = = = =============
-မန္တလေးမြို.ရဲ. ပထမဆုံး DBM သင်တန်းဖြစ်ပြီး သင်တန်းသားပေါင်း ၃၄၀ များစွာကို မွေးထုတ်ပေးပြီဖြစ်ခြင်း
-Assignment စနစ်ဖြစ်သည့်အတွက် စာမေးပွဲဖြေစရာမလိုပဲ အလုပ်ခွင်ဝင်နေသည့် working professionals များနှင့်အထူးသင့်တော်ခြင်း
-Group Discussion ရှိခြင်း
သင်တန်းကြေး တစ်ခါတည်းသွင်းပါက 10% Off.
Enrollment Fee – $250 (Diploma ရယူလိုပါက City of Oxford College တွင်စာရင်းသွင်းပြီး Assignment 18 စောင်ရေးရမည်။) Assignment များကို email ဖြင့်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
City of Oxford College သည် နှစ်ပေါင်း ၅၉ နှစ်ရှိ UK ရှိ Oxford မြို့အခြေစိုက် College တစ်ခုဖြစ်သည်။ Y.E.C Learning Center ၏ Learning partner အနေဖြင့် 2016 မှာစတင်ခဲ့သည်။ Y.E.C Learning Center သည် City of Oxford College မှ Diploma in Business & Management (DBM) Program ကို တရားဝင်ပို့ချခွင့်ရထားသော တစ်ခုတည်းသော center ဖြစ်ပါသည်။
City of Oxford College အနေဖြင့်ရရှိထားသော ဆုများမှာ
-Association of Colleges Beacon Awards for effective use of technology,
practical approach to teaching and learning and for staff development
-Apprenticeships for England Bronze Award
၁. ကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ရေးအတွက် တစ်ပတ်တစ်ရက်အချိန်ပေးနိုင်သလား?
၂. တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမည့် အနာဂတ်တွေအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေဖို့ အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လိုသလား? Yes ဆိုရင်တော့ Y.E.C Learning Center မှကြိုဆိုပါတယ်။
= = = = ===============
$Special Offer - 390,000 Ks
DBM Introduction about all subjects
DBM Online Learning Introduction 1 (DBM 1)
Management introduction (BE 1)
Introduction to Business Environment (BE 2)
Business Environment (BE 3)
Economic Environment (BE 4)
Social factors (BE 5)
Technological Factors (BE 6)
Environmental Factor (BE 7)
Legal Factors (BE 8)
PEST summary (BE 9)
PEST McDonald Case Study BE 10
Assignment (BE 11)
SWOT (BE 12)
Porter's5forces (BE13)
Marketing coc 1
Marketing coc 2
STP (Segmentation, Targeting, Positioning) COC Marketing 3
Sales funnel coc marketing 3